नेपालमा सवारी बिग्रिए बेलायतबाटै मर्मत अनि सामान ढुवानी | We Nepali
२०७६ पुष २ गते २१:१४
सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगले आम मानिसको दैनिकी धेरै हदसम्म सहज र सरल भएको छ । इन्टरनेटको माध्यमले विश्वब्यापी सञ्जालको पहुंचलाई हरेक व्यक्तिको मुठ्ठीमा ल्याइदिएको छ । अहिले आर्थिक कारोबार, वस्तु र सेवाको खरिद बिक्री देखि मानवीय आवश्यकताका धेरैजस्तो सेवा सुविधा इन्टरनेट र मोबाइल ‘एप्लीकेसन’ मार्फत नै उपलब्ध हुन थालेका छन् । यसै क्रममा नेपालभर सामान ढुवानी सेवा सहज र सरल बनाउन तथा बाटोमा सवारी साधन बिग्रिएको अवस्थामा तुरुन्त मर्मत सेवा उपलब्ध गराउन इ ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस् शुरु भएको छ । इ-ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिसमार्फत सामान आयात निर्यात गर्ने कम्पनी र आमनागरिकले कसरी सेवा लिन सक्नेछन् भन्ने विषयमा लन्डनस्थित यस कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष मण्डलसंग गरिएको कुराकानी-
इ-ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिसबारे बताइदिनु होस् न ?
इ-ट्रान्सपोर्टेसन डिजिटल प्लेटफर्म हो, जसले ढुवानी सेवा प्रवाह गर्नेहरुलाई काम गर्न छिटो र सजिलो बनाउंछ । साथै ढुवानी यातायात धनीलाई आफ्नो बिजनेस म्यानेज गर्न मद्दत पुरयाउंछ । साथै ‘भेइकल ब्रेकडाउन’ सर्भिस अन्तर्गत मुख्य राजमार्गहरुमा कुनै पनि सवारी साधन बिग्रियो भने मर्मत गर्न हाम्रो सर्भिसले छिटो छरितो रुपमा मेकानिक्सहरु पठाएर सेवा प्रदान गर्दछ । जसबाट नयां ठाउंमा सवारी साधन बिग्रिएर अलपत्र पर्न सक्ने अवस्थाको न्यूनीकरण गर्न आम नागरिकलाई मद्दत पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।
‘भेइकल ब्रेकडाउन’ का लागि देशैभरिका मुख्य राजमार्गहरुमा मेकानिक्स् पुरयाउन कसरी सम्भव छ ?
हो, यसमा चुनौती छ । तर, हामी यसको समाधान गर्न सक्छौं । देशभरका मुल सडकहरुमा सञ्चालित वर्कसपहरु हाम्रो सर्भिसमा रजिष्टर भएका हुन्छन्, रजिष्टर हुने क्रम जारी छ । सेवाग्रहीसंग सवारी बिग्रेको स्थान वरपरको वर्कसपसम्म पुग्न, खोज्न अथवा सम्पर्क नम्बर नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा समस्या हुन्छ नै । त्यसैले सेवाग्राहीले हाम्रो एप्लीकेसन प्रयोग गर्नु भएको छ वा हाम्रो कस्टमर सर्भिसमा फोन गर्नुभयो भने उहांले दिनु भएको लोकेसनको आधारमा हामी त्यस नजिकको वर्कसपलाई सम्पर्क गरि मर्मत सेवाका लागि छिटो भन्दा छिटो पठाउंछौं ।
यो सर्भिस लिन कस्टमरले कुनै शुल्क तिर्नुपर्छ वा निशुल्क ?
सवारी मर्मतका लागि सम्भव भएसम्म हामीले ३६५ दिन नै सेवा प्रदान गर्ने प्रयासमा छौं । यसका लागि वार्षिक मेम्बरसीप प्रदान गर्ने छौं र यसका लागि निश्चित मेम्बरसीप चार्ज लाग्छ । थोरै रकमले उहांहरुको यात्रामा आउन सक्ने समस्या सहजै समाधान हुन सक्छ ।
यो सर्भिसको ‘कन्सेप्ट’ कसरी आयो ?
इ ट्रान्सपोर्टेसन बिजनेसमा दुईवटा सर्भिस् छ- ढुवानी म्यानेजमेन्ट र भेइकल ब्रेकडाउन सर्भिस् । म अहिले युकेमा बस्छु र डिजिटल बिजनेस सम्बन्धि नै काम गरिरहेकाले गर्दा नेपालमा पनि आफूले जानेको कुरा भित्रयाउन पर्छ भन्ने सोच्थें । त्यसैले अनुसन्धानका क्रममा केमा डिजिटल प्रविधि अपनाउन सकिन्छ भन्दा ढुवानी बिजनेसको सोच आयो र यो नेपालको एउटा ठूलो बिजनेस अनि नयां कन्सेप्ट पनि हो । साथै ‘भेइकल ब्रेकडाउन सर्भिस्’ पनि मेरो युकेको अनुभवले गर्दा नै आएको हो ।
अहिले कहां कहां सेवा प्रदान गरिरहनुभएको छ ?
हाम्रो लक्ष्य नेपाल भरी नै आफ्नो सर्भिस दिने छ । ढुवानी प्लेटफर्म अहिले प्रदेश नं ५ बाट सुरु भएको छ र अब प्रदेश नं ४ र ६ समेट्दै छिटो भन्दा छिटो देशै भरि सेवा विस्तार गर्ने तयारीमा छौं । भेइकल ब्रेकडाउन सर्भिस्का लागि नेपालको प्रमुख राजमार्गमा रहेका धेरैजसो ग्यारेजहरु हामीसंग आवद्व छन् र हामीले सेवा प्रदान गरिराखेका छौं । नारायणघाट– काठमाण्डौं, हेटौंडा–काठमाण्डौं, नयांमार्ग– हेटौंडा,- बीरगंज– हेटौंडा- बिराटनगर र हेटौंडा- काकरभित्तासम्मको रुटमा रजिष्टर भएका सर्भिस् प्रोभाइडर वर्कसपहरु छन् ।
शुरुवाती चरणमा के कस्ता समस्या आए ? यसमा नीतिगत समस्या छन् कि छैनन् ?
शुरुवाती चरणमा कस्टरमरलाई यो एप्लीकेशनको बारेमा बुझाउन समय लाग्यो । हामी अझै पनि यसबारे जानकारी प्रदान गर्दैछौं, जुन जारी नै रहन्छ । नीतिगतरुपमा भने हामीलाई खासै समस्या छैन् । सजिलैसंग हामीले सरकारबाट एप्लीकेशन सुचारु गर्न अनुमति पायौं । अहिले नेपाल सरकारले समेत हरेक क्षेत्रलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने कार्य भइरहेको हुंदा धेरै सहज भएको छ ।
सेवाग्राहीहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ ?
हालसम्म सेवाग्राहीहरुबाट हामीले धेरै सकारात्मक प्रतिक्रिया र सपोर्ट पाइरहेका छौं । र केही चासोहरु पनि पाएका छौं । जस्तै कतिपय गाडी चालकहरु शिक्षित हुनुहुन्न कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ सोध्नुहुन्छ । यदि उहांहरु फेशबुक चलाउनु हुन्छ भने हाम्रो एप्लीकेशन सजिलै चलाउन सक्नुहुनेछ ।
ढुवानी सेवामा भाडादरको विश्वसनीयता कसरी हुन्छ?
यो डिजिटल प्लेटफर्म हो जसमा सबैं कुरा पारदर्शी हुन्छ । त्यसले गर्दा ढुवानी सेवाको भाडादर हामीले तोक्दैनौं तर भविष्यमा गएर यसले भाडादरमा खुल्ला प्रतिष्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना गर्न मद्दत पुरयाउंछ ।
विदेशमा बसेर पनि नेपालमा बिजनेस कसरी म्यानेज गर्नु हुन्छ ?
इ-ट्रान्सपोर्टेशन बिजनेस एउटा डिजिटल बिजनेस हो जसले गर्दा संसारको कुनै ठाउंमा बसेर पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि म आफैंलाई भाग्यमानी ठान्दछु किनभने म संग समझदार र धेरै मेहेनती स्टाफ टिम छन् । हाम्रो अरु बिजनेश पनि छ, जुन मेरो बुवा र भाइले संचालन गरिराख्नु भएको छ । जस्तै मण्डल माछा हयाचर इनोभेटिभ ट्रेनिङ्ग र अनुसन्धान केन्द्र अनि मण्डल दाना सप्लायर्स । बिजनेसमा फेमिली सपोर्टले गर्दा पनि मलाई सजिलो भएको छ ।
अन्त्यमा आम उपभोक्तहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यो युग सूचना प्रविधिको युग हो । यसको अधिकतम उपयोग गरि आफ्नो व्यवसाय विस्तार र दैनिकी सहज बनाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु । र मलाई यो अवसर दिनु भएकोमा तपाईंको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । –जनबोली